फेवातालको किनारमा बसेर कहिलेकाहीँ जीवनका पानाहरू पल्टाउँछु, सपना हो कि विपना भन्ने लाग्छ । बाल्यकालमा खुट्टामा चप्पल लगाउन पनि ठूलो संघष गरेकी थिएँ । कापीको पानाको चप्पल बनाई आधा घण्टासम्म खुट्टामा लगाएर रमाएको ती क्षणहरू कसरी बिसर्नु ?
आमीर खान दशकयता सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास र लैंगिक विभेदविरुद्धको अभियानमा छन् । सन् २००७ मा ‘तारे जमिन पर’ मार्फत् सन्तानको इच्छाविपरीत अभिभावकले पढाइप्रति दिने एकोहोरो दबाबलाई एउटा स्कुले बालकको दृष्टिकोणबाट कथा भनेका आमीरले त्यसको ठीक १० वर्षपछि ‘सेक्रेट सुपरस्टार’ ल्याएका छन् ।
नेपालमा सिनेमा कहिले भित्रियो ठ्याक्कै भन्न कठिन छ । न त नेपालीले कहिलेदेखि सिनेमा हेरे त्यो भन्न सकिन्छ । नेपाली भाषामा बनेका प्रारम्भिक चलचित्रबारे समेत केही विवाद अद्यापि छ, तर त्यसबारे केही लेखिसकिएको छ ।
अमेरिका बिनाको विश्वकप
विश्वमानचित्रको कुल क्षेत्रफल र जनसंख्या दुवैमा संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष तीन स्थानमा पर्छ । तर उही अमेरिका विश्वको लोकप्रिय खेल फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा भने छनोट हुन सकेन । सन् २०१८ मा रुसमा हुने फिफा विश्वकप प्रतियोगिताको लागि अमेरिका छनोट चरणमै बाहिरियो ।
म र मेरा बाको कथा
मेरो उपन्यास कुनै दिन प्रकाशन होला भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरिनँ । किनभने, त्यो मेरो विधा होइन भन्नेमा मेरो मन र मस्तिष्क दुवैको सहमति थियो । केही कथा लेख्ने जाँगर भने यदाकदा चल्थ्यो । तर, लेखेका कापीहरू मैले सुरक्षित राख्न सकिनँ ।
सिलसिलाको सुरुआतफेरि सल्किएको छ दार्जिलिङ । र, फेरि निभेको छ दार्जिलिङ । सन् १९८६ पछि एकपल्ट फेरि । सन् २००७ पछि एकपल्ट फेरि । माटोको दाबीमा ।
अंग्रेजीको फाइदासन् २०१६ को नोबेल साहित्य पुरस्कार जापानी मूलका बेलायती उपन्यासकार काजुओ इसिगुरोले पाए । यो पुरस्कार पाउनुअघि नै इसिगुरो संसारभरि यसकारण चिनिएका र पढिएका थिए कि उनी अंग्रेजी भाषामा लेख्थे ।
कथा कलंगा गढी किल्लाको लडाइँमा वीर बलभद्र कुँवरको साथमा रहेको बानादारहरूको हो । हामी इतिहास खाने जातिमा पर्छौं । फिरंगीहरूसँगको युद्धको बेला कलंगा किल्लामा रहेका वीर नेपाली सेनाहरूको साथमा कम्तीमा ४ जना बानादार थिए ।
कान्छो जिल्लाको चमक
राज्यको पुन:संरचना क्रममा रुकुम र नवलपरासी गरी दुई जिल्ला टुक्रिए । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–४ मा उल्लेख गरिएअनुसार हाललाई रकुम जिल्लाका दुई भागमध्ये प्रदेश नं. ५ मा ‘रुकुम (पूर्वी भाग)’ र प्रदेश नं. ६ मा ‘रुकुम (पश्चिम भाग)’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
ती सब अचानक भएका थिएनन्जसरी तपाईं सोचिरहनुभएको छ ।
नमस्ते तथा शुभ सन्ध्या । न्युजरुमको सिलिङमा जडित मोन्स्टर क्लकमा अहिले पाँच बजेर पाँच मिनेट गएको छ । यो सन्ध्याकालीन न्युज बुलेटिन प्रसारण गर्नका निम्ति म तपाईंसमक्ष प्रस्तुत भइसकेकी छु । तपाईंको रेडियोले यदि भर्खर मात्र हाम्रो सिग्नल टिपेको छ भने तपाईं सही मेघाहर्जसित कनेक्ट हुनुभएको छ ।
धेरैको विदेश भ्रमण गर्ने (समुद्रपार) इच्छा हुन्छ । मलाई पनि युरोप, अमेरिका, जापान आदि देश नपुगुुन्जेल अनेक कल्पना र भावना आउनु स्वाभाविकै थियो । पहिलो भ्रमण भारतपछि जर्मनी र बेलायत सन् १९६९ मा भयो र आधुनिक कहलिएका देशको आधुनिकीकरण र विकासको मेसो पाइयो ।